Yan Aung: You Raise Me Up - Celtic Woman
သံစုံတီးဝိုင်းကို အပြင်မှာတစ်ခါပဲ နားထောင်ဖူးတယ် ။
ဒါရိုက်တာရန်ပြောသလို ကြက်သီး တဖျန်းဖျန်း ထတာထက်အပြင် ရင်ဘတ်ထဲကပါ တလှပ်လှပ် ဖြစ်လာတာကလားဗျ ။ အဟေးဟေး
ကိုရင်ညိန်း က ရင်ဘတ်ထဲကပါ တလှပ်လှပ်ဖြစ်လာ
ခိုရဲကာရ မိတဲမိမတ်စ်.း)
အရမ်းကို ကောင်းပါပေတယ်။ You Raise Me Up သီချင်းကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ စီစဉ်ပုံ ၊ တီးခတ်ပုံ ၊ သီဆိုပုံအားလုံး တော်တော်သေသပ်လှပတယ်။ ဒါမျိုး တစ်ခါမှ ရှာမကြည့်ဖူးဘူး.။ အခုမှ ကြည့်ဖူးတယ်။ တကယ်လည်း အံ့သြမိတယ်။ သိပ်တော်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို လေးစားအားကျမိပါတယ်။ Share ပေးတာ ကျေးဇူး ကိုရန်အောင် :)
thks for ur sharing songs..
This is one of my favorite gospel songs. Many thanks for sharing. Joyful Christmas to you :)
တကယ်ပဲ ရင်တွေ တလှပ်လှပ် ဖြစ်သွားတယ်-